Ndị ụlọ ọrụ njem na -eme ngagharị iwe: nkwupụta minista na -ahụ maka njem nlegharị anya Italy na -eduhie
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Ndị ụlọ ọrụ njem na -eme ngagharị iwe: nkwupụta minista na -ahụ maka njem nlegharị anya Italy na -eduhie
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ezigbo Minista njem nlegharị anya Italy
Oge a na -aga nke ọma, mmemme na ọgbakọ ọgbakọ amalitegharịla. Agaghị m enye ọnụọgụ ndị ahụ, mana ọ ga -abụ ọmarịcha oge ọkọchị, nke dị nso na 2019, ma ọ bụrụ na ọ gafere karịa n'ọnọdụ ụfọdụ. Na nkenke, oge dị ezigbo mma. Anyị na -atụ anya oge oyi, iji nye ohere maka oge udo, na -enweghị jolts. ” Otu ahụ ka Massimo Garavaglia, onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya Italy kwuru na nnọkọ Rimini.
Iji okwu dị ka ọmarịcha, udo, na ihe dị mma abụghị ihe ndị nnọchi anya njem na Italy chọrọ ịnụ n'aka onye minista njem ha.
Mgbe onye ozi ahụ kwupụtara echiche dị mma ya na ụlọ ọrụ njem na mba ya, ndị ọrụ njem emeela ihe zuru ezu ma ziga akwụkwọ mkpesa.
Na nkenke, ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem na -ahụ maka njem na Italy gwara Minista njem, "Nke a abụghị eziokwu."
Minista kwukwara, "N'akụkọ ihe mere eme, njem nlegharị anya ruru 14% nke GDP, mana ọ nwere ike iru 20%. Ọ bụghị ara. Anyị nwere nnukwu ikike. Mana anyị chọrọ ihe ụfọdụ: dịka ọmụmaatụ, atụmatụ izugbe maka nri na mmanya. Mgbe ahụ anyị ga -achọ inwe 60 ITS (Ụlọ ọrụ nka dị elu maka ụmụ akwụkwọ njem) dị ka Spain. Site na obere nzukọ anyị nwere ike nweta oke ahịa. ”
Mkpesa nke MAAVI, (Ndị Njem Njem Njem Ịtali Kwesịrị Ekwesị)
N'iburu n'uche D-Day nke atọ, ụbọchị nkwalite ugwu, nke a kpọkọtara na Septemba 8 na 10:30 na Piazza del Popolo na Rome, Onye isi oche nke Associationlọ Ọrụ Ndị Ọrụ Njem, Enrica Montanucci, zigara ngagharị iwe. Njem nlegharị anya Italy Minista Massimo, onye ọbịa na nzukọ Rimini 2021 na onye mere emume njem nlegharị anya nke Italiantali dị ka oge ndekọ.
Akwụkwọ ozi si n'aka Mịnịsta Montanucci gụrụ dị ka ndị a:
Ezigbo onye ozi Garavaglia:
“Ihe ị kwupụtara na Rimini bụ ihe anabataghị maka ụdị ndị nnọchi anya njem Italy niile. Ọ bụrụ na 'oge fọrọ nke nta na ọkwa nke 2019' ị na -ekwu maka ndị na -enweghị ike ịga ebe ọzọ, wụsara n'ime Ebe ndị njem nlegharị anya Italy, na -enye, opekata mpe na nyocha mbụ, echiche na ihe niile alaghachila dịka o siri dị, mgbe ahụ anyị nwekwara ike kwenye na gị. Oke osimiri zuru oke, ụlọ oriri na ọ hotelsụ fullụ zuru oke, ndị mmadụ nọ gburugburu…
“Nke a abụghị eziokwu.
“Onye ọ bụla nke na -arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya njem site na azụmaahịa ahụla ka ọtụtụ mmadụ na -agafe n'ọfịs ha, rere (ọ dị njọ na ihe isi ike n'ihi enweghị ntụkwasị obi na enweghị ozi doro anya) ọtụtụ ebe ndị Itali na -ebuso ndoputa dị n'ịntanetị, yana ndị na -ewu ụlọ nwere aghụghọ. na -agbalịkarị ịbịakwute onye ahịa ozugbo, ndị ahịa na -atụ ụjọ na ndị na -enweghị obi abụọ, ọnụ ahịa na -arị elu nke ukwuu, na ndị ọzọ. Ezigbo ụlọ oriri na ọ doesụ doesụ apụtaghị na njem na -agbake.
“Worldwa anyị, nke ụlọ ọrụ njem na -ewe mmadụ 80,000 ọrụ, ndị na -akwụ ụtụ isi kemgbe ọtụtụ afọ na -ajụbeghị ihe ọ bụla, nọ na njedebe nke ahịrị. Anyị nwetara oge ọkọchị nke enweghị ebe ndị ọzọ na Europe, hụrụ mpịakọta ruru 35% karịa 2019, na-ezo aka naanị n'ọnwa dị elu. Inweta… Jenụwarị/Julaị, nkezi dobe bụ 90%. N'ụzọ bụ isi, ọ dịghị ihe gbanwere.
“Anyị kwenyere na ịnụ ọkụ n'obi gị, mana anyị kwenyere na ọdịnihu anyị na -eche chọrọ nkwado dị mkpa nke a ga -ekenye ya ngwa ngwa. Maka nke a, ọ nwere ike bụrụ ihe egwu ma ọ baghị uru ịkọwapụta okwu ụgha.
"Ya mere, site na MAAVI, a na -ezitere gị arịrịọ ka amachibido iji mgbasa ozi na -emerụ ahụ ma na -eduhie ndị mmadụ, ka ị gee mkpu nke 'mgbu na obi nkoropụ' nke ndị nnọchi anya njem na, ndị ọrụ ibe, arịrịọ ịlaghachi n'okporo ụzọ kọmpat. na Septemba 8. Ọtụtụ na ọgụ karịa oge ikpeazụ megide mkpu ọkụ nke ụlọ ọrụ, 'Okwu zuru ezu. Ọ bụ oge maka eziokwu. '”
Francesco ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 25, 2021 na 01:51
Ọ bụ ihe nwute na obodo nka dị ka Rome anyị tụfuru ndị otu na ndị njem na-abụghị ndị Europe.